Muxuu Antonio Guterres kala hadlay Farmaajo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu Antonio Guterres kala hadlay Farmaajo?
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, wuxuu Farmaajo, ku boorriyay in laga fogaado, wax kasta oo qalalaaso abuuri kara, isla-markaana arrimaha taagan lagu xalliyo wadahadal iyo wada-xaajood loo dhan yahay, lagana fogaado carqalad ku timaadda dhameystirka geeddi-socodka doorashada.
New York – Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, ayaa qadka taleefanka kula hadlay Madaxweynihii hore Farmaajo, xilli maalmihii la soo dhaafay la warinayay in Kooxda waqtigu ka dhamaaday doonayaan in ay carqaladeeyaan dhameystirka doorashooyinka.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Xaafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya UNSOM, Antonio Guterres, oo wicitaankiisa ku soo aaddiyay xilli xasaasi ah, ayaa Farmaajo, kala hadlay weerarrada sii kordhaya ee Kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo sii xoogaysanayay tan iyo Farmaajo xilka qabtay.
Xilli uu taagan yahay buuq ka dhashay, raacdeynta Francisco Madeira, ayuu Antonio Guterres, Farmaajo, ku wargaliyay in la soo laabay kaalintii AMISOM, loona baaan yahay in Dowladu la shaqeyso, hogggaanka imaan doona ee Hawlgalka Kalaguurka Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS).
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen saraakiil ka howlgala, Madaxtooyada Soomaaliya, Xoghayaha Guud, wuxuu Farmaajo, cadaadis ku saaray in uu ka hor wareego dhameystirka doorashooyinka ee RW Rooble, garwadeynka ka yahay, si dalku uga baxo hubanti la’aanta siyaasadeed ee uu ku jiro.
Dhanka kale, Antonio Guterres, wuxuu muujiyay sida uu u garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed ee wajahaya weerarrada Kooxda Xiriirka la leh Al-Qaacida iyo abaaraha daran ee sida weyn u saameeyay malaayiin qof oo xoola dhaqato iyo beeralley u badan, kuwaas oo garab istaag u baahan.
Wicitaanka Antonio Guterres, ayaa ku soo aaday, xilli qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka sheegayeen, in Farmaajo, doonayo inuu jid-gooyo u dhigto dhaarinta Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee JFS, oo loo balllansan yahay 14-ka April oo khamiista soo socota ku beegan.